जापानले ट्रेनभित्र अनिवार्य सिसि क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने नियम लागू गर्दै – Eps Sathi
December 4, 2021 258
टोकियो, जापान। जापानको यातायात मन्त्रालयले शुक्रबार दिएको जानकारी अनुसार यहाँको सरकारले रेल सेवा सन्चालन गर्ने कम्पनीहरुलाई अब बन्ने नयाँ रेलमा अनिवार्य रुपमा सिसि क्यामेरा जडान गर्न भनेको छ। गत अक्टोबर महिनामा टोकियोको एक गुडिरहेको ट्रेनभित्र च’क्कु आ’क्र’म’ण भए पश्चात सु’र’क्षाका दृष्टिकोणले सरकारले यस्तो नि’य’म ला’गू गर्न लागेको हो।
सरकारले रेल सेवामा सु’र’क्षा बलिया बनाउनका लागि रेलमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुको लगेज चेकजाँ’च गर्नका लागि यात्रुहरुको अनुमति लिने तथा यात्रुहरुलाई पनि सहयोगका लागि अपिल गरेको छ। रेल सेवा सन्चालकहरुलाई यो बर्षको जुलाई महिनाबाट यात्रुहरुको लगेज चेकजाँज गर्नका लागि पनि सरकारले अनुरोध गरेको छ।
जापानको ल्याण्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड टुरिजम मन्त्रालयले देशभित्रका मुख्य रेलवे सेवा सन्चालकहरुसँगको छलफल पछि यस्तो निर्णयमा पुगेको हो। अहिले लागू भएका नियमहरु रेल यात्राका क्रममा सु’र’क्षा तथा यसबाट ब’च्ने उ’पायहरुका बारेमा केन्द्रित थियो। विगतमा भएका घ’ट’नाबाट पाठ सिक्दै रेलभित्र राखिने सुरक्षा क्यामेराको प्रभावकारीताको मूल्याङ्कन गरिनेछ।
रेल सन्चालन सम्बन्धि नयाँ नि’र्देशनमा रेल सन्चालकले यात्रा गर्ने यात्रुहरुलाई आ’कश्मि’क बटमहरु कहाँ कहाँ रहेका छन र आवश्यक परेको खण्डमा बिना हिच किचाहट त्यसको प्रयोग गर्नका लागि बताउनुपर्नेछ। आकस्मिक रुपमा रेलको ढोका खोल्न प्रयोग गरिने लिभर र त्यसको प्रयोग के कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि बुझ्ने गरि यात्रुहरुलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।
गत अक्टोबर ३१ तारिखमा केइओ लाईनमा भएको घ’ट’ना’मा रेलभित्रका यात्रुहरुले धेरै पटक आ’क’श्मि’क सू’चना दिने बटन द’बाएपनि रेल सन्चालकहरुले यसबारे सूचना पाउन सकेका थिएनन। रेलभित्र क्यामेरा जडान नभएकाले भित्र के भइरहेको समेत उनिहरुले थाहा पाउन सकेका थिएनन। अब क्यामेरा जडान भएपछि रेल सन्चालकले रेलभित्र के भइरहेको छ सजिलै थाहा पाउने विश्वास गरिएको छ।
Prevकिम जङ उनको लेदरको ज्याकेटको चर्चा विश्वभर, आखिर कारण के होला? जानौं
Nextस्कूले छात्रालाई रे’प गर्ने नेपाली र बंगाली विध्यार्थीको अनुहार सार्वजनिक गर्न कोरियाली जनताको माग
नेपालबाट कृषि प्रशिक्षार्थी लैजाने इजरायलको प्रतिवद्धता, जानौं कस्तो भिजा हो यो?
कोरिया काण्ड: श्रीमानले भिजा पठाएकै दिन श्रीमति अन्तै हिँडीन, सोझा श्रीमान नेपाल फर्के (भिडियोसहित)
नयाँ पुस्ताले कोरियाको सत्तासिन डेमोक्रेटिक पार्टिलाई देखाइदियो रातो झण्डा